Fironana sary amin'ny famolavolana karatra krismasy | Famoronana an-tserasera
Fironana sary amin'ny famolavolana karatra krismasy
Ny endrika fifandraisana dia nivoatra tamin'ny hafainganam-pandeha tato ho ato, na izany aza, ny fampiasana ny karatra krismasy miorina amin'ny taratasy dia mijanona ho vahaolana mihombo amin'ny daty manan-danja toy ny fankalazana ny Noely. Ity dia fomba tsara hiverenana amin'ny lasa fotoana fohy ary angamba izany no mahatonga azy hanana toetra tia sy akaiky. Amin'io lafiny io dia ahitantsika fahasamihafana vitsivitsy amin'ny fomba fampisehoana ny atiny. Satria samy hafa ny fiantraikan'ny fiarahabana an-taratasy sy ny fiarahabana amin'ny nomerika (na tranonkala), dia samy hanana paikadim-pifandraisana samy hafa ihany koa izy ireo ary noho izany dia misy endrika na fisehoan'ny hatsarana samihafa.
Azoko antoka fa maro aminareo no hampiasa an'io safidy io hiarahaba ny olon-tianao amin'ny fiandohan'ny taona vaovao ary izany no antony hizarako aminareo ny endrika be mpampiasa indrindra amin'ny firarian-tsoa. Araka ny hitanao, ny singa tsy manan-tsiny sy saika an-jaza ananan'izy ireo dia tsy azo lavina, singa iray tena manatrika ireny fety ireny satria ny ivon'ny zava-drehetra dia ny zaza, aza hadinoina fa fety misy singa ara-panahy matanjaka io ary ny hafatra ifotony dia nahaterahan'i Jesosy Kristy. Manantena izahay fa ireo fironana dimy ireo dia hanome aingam-panahy anao ary azonao ampiharina amin'ny fiarahabana anao:
Amin'ny lafiny iray, izy io dia maneho karazana fanomezam-boninahitra ireo asa tanana sy volavola nanjaka nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Ny votoatin'ny sary tanana sy ny fahalavorariana amin'ny antsipiriany dia averina. Ity karazana endrika ity dia hanome singa tena lehibe toy ny fanakaikezana, ny mahaolona ary ny hafanana. Ireo karazana karatra ireo dia mazàna vita amin'ny pensilihazo na saribao ary matetika manome izany amin'ny antsipirian'ny loko.
Retro na vintage
Tsy zava-baovao ny hoe lasa lasa avant-garde ny lasa. Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ny mpamorona endrika teknika, tolo-kevitra ary fironana velona dia nampiharina tamin'ny folo taona lasa. Izy io dia zavatra izay nahomby tamin'ny sehatry ny lamaody, teo amin'ny tontolon'ny haingo ary mazava ho azy amin'ny famolavolana sary. Amin'ireto volavola ireto, novolavolaina ny forona miaraka amina nuansa tantaram-pitiavana sy ny fikitika ny melankolika izay mamindra antsika amin'ny vanim-potoana hafa. Matetika ampiasaina ny endritsoratra taloha ary misy lanjany lehibe koa amin'ny fampiasana ny endritsoratra sora-tanana na soratra. Mikasika ny safidy chromatique, ny tonony be mpampiasa indrindra dia mitoetra ao anaty vahaolana mavo. Ankoatry ny sary sy sary taloha napetraka amin'ny endri-tsoratra, zava-nitranga ary tamin'ny vanim-potoana taloha.
Minimalism dia nipoitra ho toy ny amin'izao fotoana izao nandritra ny folo taona tamin'ny enim-polo taona tany Etazonia na dia mitohy mijanona ho matanjaka aza ary mihamafy hatrany ankehitriny amin'ny sehatry ny endrika sary rehetra. Ny votoatin'ny minimalism dia ny fikatsahana ny tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fahatsorana. Ny firavaka sy ny firafitra tsy ilaina rehetra dia hesorina mba tsy hitandremana afa-tsy amin'ireo singa izay manana fiasa ka ilaina. Ny iray amin'ireo fototry ny minimalism dia ny hoe rehefa voafaritra tsara ny zavatra tokana (amin'ny fomba mazava sy tsy azo iadian-kevitra io) dia tonga amin'ny fanehoana hevitra na hafatra tonga lafatra isika.
Araka ny azonao an-tsaina dia famolavolana mifototra amin'ny fampiasana endritsoratra samihafa hananganana lahatsoratra tokana. Izy io dia karazan-tsarimihetsika typographic izay manome rivotra tsy misy ahiahy sy tanora ho an'ny famoronana ankapobeny. Amin'ny ankapobeny, matetika izy io dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny alternatives typographic, mitady fitambarana mirindra foana. Amin'io lafiny io dia mila mitandrina ianao satria misy loharano irery izay manome valiny tena tsara, fa rehefa ampifandraisina amin'ireo zavatra tsy mendrika hafa dia mahita vokatra mifanaraka isika ary noho izany tsy misy lanjan'ny hatsarana.
Safidy iray hafa izay avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny zavakanto Japoney antsoina hoe Origami. Ny vokatr'izany dia endrika nofehezin'ny tsipika mahitsy sy ny fampiasana loko fisaka hamoronana sary sy zavatra ary endri-tsoratra mizarazara. Mety ho sarotra be izany, indrindra raha manandrana mamerina ny antsipiriany faran'izay betsaka amin'ny antsipiriany sy ny nuances izahay. Amin'io lafiny io dia hitantsika ilay antsoina hoe fomba faran'izay geometrika izay mifototra amin'ny fampiasana tsipika mahitsy fotsiny sy ilay geometrika izay misy toerana misy ny tsipika miolakolaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fironana sary amin'ny famolavolana karatra krismasy
15 fanomezana tsy misy antony ho an'ny mpamorona sary mahafinaritra!